विराटनगरका तीन जना डाक्टर पक्राउ, पक्राउ पर्नेमा डा. जावेदअख्तर पनि - inaruwaonline.com
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, आषाढ ०३, २०७३ समय: १४:५६:३२
३ असार, मोरंग। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरि चिकित्सा पेशामा अावद्ध ३ जना डाक्टरहरूलाइ केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युराे (सीअाइबी) काे प्रधान कार्यालय काठमाडाैबाट खटिएकाे टाेलीले विराटनगरबाट पक्राउ गरेकाे छ ।
यसै गरि विरगंजबाट पनि नाै जना नक्कली डाक्टरका अाराेपीहरू पक्राउ परेका छन् । उनीहरूलाइ नक्कली शैक्षिक प्रमाण पेश गरी डाक्टरी अध्ययन् गरेको भन्ने आरोपमा पक्राउ परेका हुन् ।
माथिको निर्देशन अनुसार पक्राउ गरिएकाले कारण थाहा नभएको प्रहरी प्रमुख एस्पी भण्डारीले बताउनुभयो । हाल तीनै जना चिकित्सकलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखिएको छ ।सम्भवतः उनीहरुलाई भोलिनै काठमाडौँ लैजाने तयारी हुँदैछ भण्डारीले भन्नुभयो ।
प्रहरीले चिकित्सकलाई पक्राउको कारण खुलस्त नखुलाए पनि तीनै जना चिकित्सकको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र रहेको बताइएकाले पक्राउ गरिएको अनुमान गरिएको छ । उनीहरुलाई काठमाडौँ लगी अनुसन्धान गरेपछि थप कुरा खुल्ने र प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराउने तयारी समेत गरेको छ ।
काे काे परे विराटनगरबाट पक्राउ?
– लाइफगार्ड अस्पतालका वरिष्ठ फिजिसियन डा जावेदअख्तर अन्सारी
– वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ सञ्जयकुमार दास
– ट्रमा सेन्टरका महमुद अब्दुल आलम